I-Sigstr: Dala, Sebenzisa, futhi ulinganise imikhankaso yakho yesiginesha ye-imeyili | Martech Zone
Yonke i-imeyili ethunyelwa ngaphandle ebhokisini lakho lokungenayo iyithuba lokumaketha. Ngenkathi sithumela incwajana yethu kuthoni yababhalisile, siphinde sithumele amanye ama-imeyili angama-20,000 XNUMX ekuxhumaneni nsuku zonke emuva naphambili phakathi kwabasebenzi, amaklayenti, amathemba, kanye nabachwepheshe bezobudlelwano bomphakathi. Ukucela wonke umuntu ukuthi engeze isibhengezo ukukhuthaza iphepha elimhlophe noma i-webinar ezayo ngokuvamile kudlula ngempumelelo encane. Abantu abaningi basishaya indiva isicelo, abanye basiphazamisa isixhumanisi, futhi abantu abangahle bachofoze ukubizelwa esenzweni abakutholi.
Uma ungakholelwa ukuthi amasiginesha e-imeyili abalulekile, hlola lokhu kuhlaziywa kwamehlo kwe-heatmap kusuka I-eyequant.
Lapha Sigstr iyangena! USigstr unikeza ukuphathwa okuphakathi kwemikhankaso yakho yesiginesha ye-imeyili lapho bonke abasebenzisi bangavuselelwa khona manjalo. Imikhankaso ingakhiwa ngokulayisha isithombe noma ukufaka umbhalo. Abasebenzi bakho abadingi ukuhlela umugqa owodwa wekhodi - iqembu lakho lokumaketha lingashintsha imikhankaso noma nini lapho lithanda khona.
USigstr uze anikeze nezinguqulo ezifanele zomkhankaso weselula nedeskithophu ngokubuka kuqala kokubili. Futhi-ke, uSigstr unikeza okulula analytics ukukhombisa inani lezikhathi umkhankaso obukwe ngazo kanye nokuchofoza ngomkhankaso noma ngumsebenzi!
I-Sigstr futhi ivumela ukuthi kudalwe amaqembu. Lesi isici esihle ngoba ungaba neqembu lethimba lakho lokusekela elinikezwe umkhankaso okhuthaza umkhiqizo omusha, ngenkathi iqembu lakho lokuqasha labelwe umkhankaso wekhasi lemisebenzi, ngenkathi iqembu lakho lokuthengisa liphakamisa iphepha elimhlophe ku-Return Ekutshalweni kwesisombululo sakho!
Lokhu kuvumela abasebenzisi ukuthi bangezwe emaqenjini bese iqembu ngalinye lingangezwa kumikhankaso ethile! Ngangijabule kakhulu ngakho Sigstr ukuthi sisayine ngokushesha - futhi kube kuhle ukusebenzisa nokuphatha kubasebenzi bethu bonke.
Ukuhlanganiswa kwesiginesha ye-Sigstr imeyili
Ukufaka iSigstr okulula kunoma yiliphi ibhizinisi ngoba manje sekukhona ukuhlanganiswa ne-Active Directory, Outlook, Exchange, Office 365, Google Suite, Gmail ne-Apple Mail.
I-Act-On - Thuthukisa imizamo yakho yokumaketha ngaphakathi kwe-Act-On ngokufaka isiginesha ye-Sigstr bese ukhankasela ukuxhumana kwakho kwe-imeyili kwe-Act-On.
I-Hubspot - I-Sigstr futhi ihlanganiswe ne I-Hubspot lapho ungavumelanisa noma yikuphi I-Hubspot Uhlu lwe-Smart bese ulunikeza umkhankaso othile we-Sigstr ABM, bona imicimbi yesikhathi ku I-Hubspot lapho bechofoza, dala ngokuzenzakalela I-Hubspot oxhumana nabo ngokuya ngokuthi ngubani abathumela i-imeyili, futhi basebenzise ukusebenzisana kwesiginesha ye-imeyili kokusebenzayo I-Hubspot Ukugeleza komsebenzi!
Marketo - Qondanisa ukumaketha kwakho kwesiginesha neMarketo Smart Lists kanye ne-Landing Pages. Futhi ungahlanganisa amasiginesha namathempulethi we-imeyili kaMarketo.
Salesforce - Qondanisa ukumaketha kwakho kwesiginesha nemikhankaso ye-Salesforce nemibiko. Futhi ungahlanganisa amasiginesha nezifanekiso ze-VisualForce.
UkuthengisaLoft - Faka isicelo sesiginesha kaSigstr bese ukhankasela ukuxhumana kwakho kwe-imeyili kweCadence
Pardot - Qondanisa ukumaketha kwakho kwesiginesha nemikhankaso yePardot nemibiko. Ungafaka futhi amasiginesha ngezifanekiso ze-imeyili zePardot.
Cela i-Sigstr Demo
Tags: I-Act-Oni-actonamasiginesha we-acton imeyiliamabhanelaimikhankaso imeyiliisignesha ye-imeyliamasiginesha e-imeyiliukulandela isoimephu yokushisaindawoamasiginesha e-imeyili we-hubspotumabhebhanaamasiginesha e-marketo imeyiliushweleama-pardot imeyili amasigineshaamasiginesha e-imeyili yabasebenziisigineshasigstr